उच्च रक्तचापः गर्भवती महिला झनै जोखिममा |
उच्च रक्तचापः गर्भवती महिला झनै जोखिममा
प्रकाशित मिति :2018-05-17 14:50:10
ललितपुर । जनकपुर स्थायी घरभई हाल किर्तिपुर बस्दै आएकी २६ वर्षीया अस्मिता शाही बुधबार काठमाडौं थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा भेटिइन् ।
उनी अस्पताल भर्ना भएको २ दिन भयो । रगत बग्ने, पानी बग्ने समस्या भएपछि वैशाख ३१ गते अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । उनलाई सुत्केरी हुने मिति यही जेठ २९ गते दिइएको छ । तर अहिलेदेखि नै रगत र पानी बग्न थाले पछि अस्पताल भर्ना भएको उनले बताइन् ।
गर्भावस्थाको आठौं महिनामा उनलाई रक्तचापको समस्या देखियो । अस्मिताले उच्च रक्तचापको औषधि खाइराखेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘डाक्टरले प्रेसर हाइ छ भनेका छन् । औषधि खाइराखेको छु । अहिले अलि ठिक भएको छ ।’
यो उनको दोस्रो गर्भ हो । पहिलो सन्तान जन्माउँदा भने कुनै समस्या नभएको उनले बताइन् । यस पटकको गर्भवती हुँदा उनले किर्तिपुर अस्पतालमै चार पटकसम्म गर्भ जाँच गरिन् । पहिलो सन्तान जन्मिएको ६ वर्ष पछि उनले दोस्रो सन्तान जन्माउन लागेकी हुन् ।
खोटाङ घर भई हाल ललितपुर भैंसेपाटी बस्दै आएकी २५ वर्षीया कञ्चन राई पनि थापाथली प्रसूति गृहमै भेटिइन् । राई अस्पताल भर्ना भएको बुधबार दुई दिन भएको थियो ।
डाक्टरले वैशाख २३ गते सुत्केरी हुने दिन तोकेका थिए । तर पनि अहिलेसम्म सुत्केरी नभए पछि उनी अस्पताल भर्ना भएकी हुन् । उनमा पनि रक्तचाप देखिएको छ ।
‘शिशु कम चलेपछि अस्पताल भर्ना भएकी हुँ । डाक्टरले प्रेसर बढेको छ भनेका छन् । अहिले अलि कम भएको छ’ उनले भनिन् । उनी पनि दोस्रो पटक सुत्केरी हुँदैछिन् । पहिलो पटक शिशु जन्माउदा उनलाई यस्तो कुनै समस्या भएको थिएन ।
अस्पतालमा आउने प्रत्यक एक सय जना गर्भवती महिला मध्य ५ देखि १० जनामा उच्च रक्तचापको समस्या देखिने गरेको प्रसूति गृहकी नर्स गायत्री सुवेदी बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘बिरामी हेरेर औषधि दिने गरेका छौं । कसैलाई फलोअपमा लागि बोलाउँछौ भने कसैको सर्जरी गरेर छिट्टै शिशु निकाल्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
गर्भ रहनुअघि सामान्य रहेको रक्तचाप गर्भवती भए पछि करिब १५ प्रतिशत महिलाहरूमा बढ्छ । त्यस्तै गर्भ रहेको २० हप्ता जति अवधि पछि उच्च रक्तचापको समस्या देखिने गरेको छ ।
‘गर्भवतीे मृत्युको मुख्य कारण उच्च रक्तचाप’
मुटुबाट रक्त सञ्चार हुने बेलामा रक्तनली (आर्टरी) को भित्तामा पर्ने दबाबलाई रक्तचाप भनिन्छ । हाम्रो मुटुले रगत पम्प गर्दा कति बल लगाएर पप्प गर्छ । त्यो नै उच्च रक्तचाप हो ।
हाम्रो मुटुमा नसाहरू हुन्छन् । कति फुक्न सक्छन्, कति खुम्चिन । मान्छेको शरीरमा रगतको भोलुम कति छ । मुटुले प्रेस गर्दा बाहिर तिरको नसा टाइट छ भने बल लगाउनुपर्छ । जसले गर्दा प्रेसर बढ्न थाल्छ ।
शरीरमा हुनुपर्ने भन्दा रगतको मात्रा बढी भयो भने उच्च रक्तचाप हुन्छ । जस्तो नुन बढी खाने मान्छेको रगतको भोलुम बढी हुन्छ । पानीको मात्रा बढी हुन्छ । यसले पनि प्रेसर बढाउँछ । यसर्थ प्रेसर भनेको शरीरमा मुटुले ब्लड पम्प गर्दा लगाउने बलको प्रोडक्ट हो ।
गर्भावस्थामा कस्तो किसिमको उच्च रक्तचाप देखिन्छ ?
गर्भवती महिलामा तीन खालको उच्च रक्तचाप हुन्छ । एउटा गर्भवती हुनभन्दा अगाडि नै उच्च रक्तचाप हुन्छ ।
उच्च रक्तचाप जसलाई क्रोनिटाइपोटेन्सन भनिन्छ । गर्भवती हुनभन्दा पहिल्यै वा गर्भवतीको २० हप्ता भित्र रक्तचाप बढ्छ । त्यो गर्भावस्थाको कारणले हुँदैन, अरु नै कारणले हुन्छ ।
अर्को भनेको २० हप्ता पुगेपछि गर्भावस्थाको कारणले प्रेसर बढ्छ । त्यो पनि दुई खालको हुन्छ । एउटा प्रेसर बढ्यो । २० हप्ता पछि अनि मृगौला पनि इन्भल्ब भयो । त्यसबाट पिसावमा प्रोटिनहरू निस्किन्छ । त्यसलाई क्रिलिम्पिसिया भन्छौं । प्रेसर बढ्यो तर पिसावमा प्रोटिन देखिएन भने त्यसलाई जेष्टेसनल हाइपोटेन्सन भन्छौं ।
सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था भनेको गर्भवतीमा उच्च रक्तचाप भयो भने मृगौला पनि इन्भल्ब (सहभागी) हुन्छ । यो भनेको प्रेसर पनि उच्च हुने हो । यसमा पिसावमा प्रोटिन जान्छ । यो प्रिकिम्सिया हो । यो प्रिकिम्पिसियालाई राम्रोसँग उपचार गरेन भने मान्छे काँप्छ ।
यो प्रिकिम्पसिया एक सय जना मध्य १२ देखि १५ जना महिलालाई हुन्छ । त्यसमा पनि त्यो १२ देखि १५ जनामा सबैलाई नराम्रो हुँदैन । १ देखि २ जनालाई एकदमै उच्च रक्तचाप हुन्छ । जसलाई सीवीआर प्रिकिम्सिया भन्छौं ।
यो हुँदा कस्तो असर गर्छ ?
प्रिकिम्सिया अलि जटिल खालको हुन्छ । यसको कारणले गर्भमा रहेको शिशु नबढ्ने हुन सक्छ । शिशुले जति अक्सिजन पाउनुपर्ने हो त्यो पाउँदैन । अक्सिजन नपाएपछि शिशु बढ्दैन् । एक सानो शिशु भयो ।
दोस्रो जुन शिशुले खान पाउँदैन्, त्यसले पिसाव पनि कम फेर्छ । पिसाब कम फेर्नाले शिशु खेल्ने पानी पनि कम हुन्छ । पानीको पोका भनेको शिशुले फेरेको पिसाब हो । त्यो पनि कम हुन्छ । अर्को शिशु दुब्लो, सानो र ख्याउटो हुन्छ । शिशु पेटभित्र मर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ ।
अर्को रक्तचाप बढेपछि आमालाई कम्पन हुन सक्छ । यसलाई मेडिकल भाषामा इक्लेम्पसिया भन्छौं । मान्छे छारे रोग जसरी काँप्छ । सिथिल हुन्छ र मान्छे बेहोसै हुन्छ । जसको कारण आमाको मृत्यु हुन्छ ।
संसारभरि आमा मर्ने प्रमुख कारण इक्लेम्पसिया हो । आमाको मृत्युको दोस्रो कारण मात्रै रगत बग्ने हुने हो ।
त्यसैले उच्च रक्तचाप भयो भने शिशु बढ्न सकेन भने महिना नै नपुगी निकाल्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसले गर्दा शिशु पनि मर्ने सम्भावना हुन्छ । बाँच्यो भने त्यसलाई आइसीयुमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
उच्च रक्तचाप हुँदा महिलामा कस्ता लक्षण देखिन्छ ?
लक्षण हेर्दा केही देखिदैन । कसैको खुट्टा सुन्निएको हुन्छ । तर गर्भावस्थामा यसै पनि सुन्निन सक्छ । कसैको पिसाबमा एल्वुमिन देखिन्छ तर अरु नै कारण हुन सक्छ । कसैको शिशु बढेन, पेट सानो छ अर्थात हुनुपर्ने आठ महिनाको शिशु ६/७ महिनाको जस्तो मात्रै देखियो भने ए कतै प्रेसर त बढेको छैन भनेर प्रेसर जाँचे पनि थाहा हुन्छ ।
लक्षण देखिदा धेरै ढिलो हुन्छ । शरीर सुन्निने, काँप्ने, शिशु नबढ्ने त्यो भइसक्दा धेरै ढिलो हुन्छ । त्यो भएर लक्षण देखिए पछि होइन्, नदेखिदै रक्तचाप जाँच गर्नुपर्छ ।
पहिलो पटक भर्गवती हुँदा उच्च रक्तचाप भयो भने दोस्रो पटक पनि हुने सम्भावना हुन्छ ?
सम्भावना हुन्छ । त्यसका लागि गर्भावस्थामा उच्च रक्तचापबाट बँच्नुपर्छ । पहिलो पटक गर्भवती हुँदा प्रेसर बढेको छ, बेहोस भएको छ भने अर्को पटक गर्भवती हुँदा त्यसबाट बच्नका लागि केही उपायहरू छन् । हामी त्यसबाट बच्न औषधि दिन्छौ । अनुसन्धानले के भनेको छ भने औषधिले ५० प्रतिशतमा प्रेसर बढ्न दिँदैन ।
उच्च रक्तचाप हुँदा आमा र शिशुको ज्यानमा कत्तिको जोखिम हुन्छ ?
उच्च रक्तचार हुँदा जुन साल हुन्छ त्यो साल पनि सानो हुन्छ, बढ्दैन् । शिशु जन्मिए पछि मात्रै त्यो साल छुटिट्ने हो । कहिले शिशु नजन्मिदै साल छुट्टिन्छ । त्यो भयो भने शिशु मर्छ । अर्थात साल छुट्टिएको तीन मिनेट भित्रै शिशु मर्छ ।
एकातिर रगत बगिरहेको छ, अर्कोतिर रगत जमिराखेको हुन्छ । जसलाई हामी मेडिकल भाषामा डीआइसीइ भन्छांै । रगत जम्यो भने शरीरमा रगत बढ्नबाट रोक्ने जुन कण हुन्छ, त्यो सबै खर्च हुन्छ र शरीरको अर्को ठाउँमा ब्लीडिङ हुन्छ । त्यसैले आमा र शिशुको मृत्युको सम्भावना अत्यन्तै उच्च हुन्छ । आमा र शिशुको मृत्युको एउटा मुख्य कारण गर्भावस्थामा उच्च चाप हो ।
उच्च रक्तचाप कम गर्न गर्भावस्थामा के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
गर्भवती हुँदा रक्तचाप बढी छ कि छैन भनेर जाँच्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले पनि ८० प्रतिशत महिला मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउँछन् । २० प्रतिशत अझै स्वास्थ्य संस्था जाँदैनन् भन्ने छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्था आफ्नो घरको पहुँच नजिक हुनुप¥यो । अर्को सस्तो, गुणस्तर पनि हुनुपर्‍यो ।
गर्भावस्थामा महिलाले चार पटकसम्म स्वास्थ्य संस्थामा गएर जाँच गर्नुपर्छ भनेर चेतना हुनुपर्छ । यसले गर्दा भोली हुने हानी, जटिलता कम हुन्छन् ।
घरपरिवारले कस्तो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ला ?
घरपरिवारको पनि ठूलो जिम्मेवारी छ । कम्तिमा पनि स्वास्थ्य संस्थामा जाने दिन घरबाट छु्ट्टि दिनुपर्‍यो । जस्तो तिमी जँचाउन जाउ भनेर । श्रीमान साथै जाँदा अझ राम्रो । घरपरिवारले पोषिलो खाना खान, आराम गर्न, घरको वातावरण शान्त राख्न, गर्भवतीलाई राम्रो हेरचाह गर्ने राम्रो वातावरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसमा समाजको पनि भूमिका छ । कुनै गर्भवती महिला जँचाउन गएकी छैनन् भने जँचाउन जाने सल्लाह र सहयोग गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थामा जचाएर प्रेसर जाँच्यो भने प्रेसर के कति छ भनेर थाहा हुन्छ र प्रेसरका कारण आमा र शिशुलाई असर गर्छ भनेर साथीभाई र समाजले भन्नुप¥यो ।